Register | Login HomeLatestsBusinessEntertainmentHealthEducationTechnologySportsPoliticsCrimeOthers	master_guru
0 fans	News by User
Newest1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 . . . . . Oldest
ဆုရခဲ့သော အီဘရာဟင်မိုဗစ်နှင့် အန်ဆလော့တီ	shared by master_guru	on 05/20/13	PSG အသင်းမှ တိုက်စစ်မှူး အီဘရာဟင်မိုဗစ်နှင့် နည်းပြ အန်ဆလော့တီတို့မှာ ပြင်သစ်လိဂ်ဝမ်း တစ်နှစ်တာ အကောင်းဆုံး ဆုများ ရရှိခဲ့ကြသည်။
၁၉၉၄ နောက်ပိုင်း ပြင်သစ် အမှတ်ပေးဇယား ချန်ပီယံ.......	လီဗာပူးမှ ကာရေဂါ နေရာမှာ အစားထိုးရန် ခက်ခဲ	shared by master_guru	on 05/20/13	လီဗာပူး အသင်းနည်းပြ ရော်ဂျာက အနားယူမည့် အသင်း နောက်ခံလူ ကာရေဂါနေရာမှာ နောက်ခံလူသစ် တစ်ဦး ဖြင့် အစားထိုးရန် ခက်ခဲမည် ဖြစ်ကြောင်း ၀န်ခံ ပြောကြားခဲ့သည်။
လီဗာပူး အသင်း နောက်ခံလူ �.......	ဒီဂျစ်တယ်မြေပုံ ဝန်ဆောင်မှုအား Alibaba ဒေါ်လာ ၂၉၄ သန်းဖြင့် ဝယ်ယူ	shared by master_guru	on 05/19/13	တရုတ်ထိပ်တန်း အွန်လိုင်းနည်းပညာ အဖွဲ့အစည်း Alibaba သည် တရုတ်နိုင်ငံတွင် နာမည်အကြီးဆုံး ဒီဂျစ်တယ်မြေပုံ ထောက်ပံ့ရေး နည်းပညာ ကုမ္ပဏီဖြစ်သည့် AutoNavi ၏ ရှယ်ယာပေါင်း ၂၈ ရာခိုင်နှုန်းကို ဒေါ်လ�.......	နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန် အမေရိကန်နိုင်ငံကို သွားရောက်ပြီဟုဆို	shared by master_guru	on 05/19/13	နှစ်ပေါင်း ၅၀ နီးပါး အတွင်းမှာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ သမ္မတ တစ်ဦးကို အမေရိကန်နိုင်ငံ အိမ်ဖြူတော်က ပထမဆုံး အကြိမ် ဖိတ်ခေါ်ခဲ့တဲ့ ခရီးစဉ်အတွက် နိုင်ငံတော် သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန်ဟာ သောကြာ.......	အာဆင်နယ်မှ ၀ီရှိုင်းယားအား ဘိုင်ယန် ခေါ်ယူလို	shared by master_guru	on 05/13/13	ဘွန်ဒစ်လီဂါ ချန်ပီယံ ဘိုင်ယန်မြူးနစ် အသင်းသည် အင်္ဂလန် ကလပ် အာဆင်နယ် အသင်းမှ ကွင်းလယ် ကစားသမား ဂျက်ဝီရှိုင်းယား အား ခေါ်ယူရန် စိတ်ဝင်စားနေကြောင်း သိရသည်။
ဘိုင်ယန်မြူးနစ် အသင်း နည�.......	မြန်မာ့မွေးမြူရေးနှင့် ရေလုပ်ငန်းဘဏ် အမည်သစ်ပြောင်းမည်	shared by master_guru	on 05/12/13	မြန်မာ့မွေးမြူရေးနှင့် ရေလုပ်ငန်းဘဏ် လီမိတက်ကို အများပိုင်ဘဏ်စစ်စစ် ပြုလုပ်လိုတာကြောင့် အမည်သစ် ပြောင်းလဲမယ့် အကြောင်း သတင်းစာရှင်း လင်းပွဲတစ်ခုကို မေ ၁၂ ရက်နေ့က မြန်မာ့မွေြး.......	ရာသီ အကောင်းဆုံး အဆုံးသတ်လိုသည့် အယ်လီဂရီ	shared by master_guru	on 05/12/13	အီတလီ ကလပ် အေစီမီလန် အသင်းနည်းပြ အယ်လီဂရီက ပြီးခဲ့သည့် မေလ (၈) ရက်နေ့က ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့သည့် ပက်စကာရာ အသင်းအား (၄-၀) ဖြင့် အနိုင် ရရှိခဲ့သည့် ပွဲစဉ် အပြီးမှာ အသင်းရဲ့လက်ရှိ ခြေစွမ်းကို ထ�.......	ကမ္ဘာကျော် ဖို့ဒ်ကားကုမ္ပဏီ၏ ကားအရောင်းပြခန်းနှင့် ဆားဗစ်စင်တာကို ယခုနှစ်ပိုင်းတွင် ဖွင့်လှစ်မည်	shared by master_guru	on 05/11/13	အမေရိကန် အခြေစိုက် ကမ္ဘာကျော် ဖို့ဒ်ကားကုမ္ပဏီက မြန်မာနိုင်ငံမှ Capital Automotive Ltd. နှင့် အကျိုးတူ ပူးပေါင်းကာ ကားအရောင်းပြခန်းနှင့် ဆားဗစ်စင်တာကို ယခု နှစ်ကုန်ပိုင်းတွင် ဖွင့်လှစ်သွားမည် �.......	ဂျိုဗက်တစ်ကို ခေါ်ယူနိုင်ရန် အာဆင်နယ် ကြိုးပမ်း	shared by master_guru	on 05/11/13	အာဆင်နယ် အသင်းသည် ဖီအိုရင်တီးနားမှ တိုက်စစ်မှူး စတီဖန်ဂျိုဗက်တစ်ကို ခေါ်ယူနိုင်ရန် ကြိုးပမ်းနေသည်။
အာဆင်နယ် နည်းပြ ၀င်းဂါးသည် အဆိုပါ မွန်တီနီဂရိုး တိုက်စစ်မှူးကို လာမည့် ရာသီ �.......	MFF ရှုံးထွက် ဖလား ပြိုင်ပွဲအား ယခုရာသီတွင် ကျင်းပမည် မဟုတ်	shared by master_guru	on 05/11/13	လာမည့် ၂၀၁၃ ခုနှစ် ဆီးဂိမ်းစ် ပြိုင်ပွဲဝင် မြန်မာ ယူ-၂၃ လက်ရွေးစင် အသင်း လေ့ကျင်ချိန် ပိုမို ရရှိရန်နှင့် ကစားသမားများ ဒဏ်ရာ အနာတရ ကင်းရှင်းစေရန် အတွက် နှစ်စဉ် ကျင်းပနေကျ MFF ရှုံးထွ.......	Chemical အသုံးပြုရန် မလိုအပ်သော ULF နည်းပညာကို မြန်မာနိုင်ငံတွင် တပ်ဆင်အသုံးပြုနိုင်ပြီ	shared by master_guru	on 05/10/13	မြန်မာနိုင်ငံရှိ စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံ၊ Cooling Tower နှင့် Boiler များ သန့်စင်ရာတွင် အသုံးပြုလျက်ရှိသော Chemical များအစား ULF (Ultra Low Frequency) ဖြင့် ပြုပြင်ထားသော ရေအားအသုံးပြု၍ သန့်စင်ခြင်း နည်းပညာကို 38 Marine And Off Share.......	ရာသီမကုန်ခင် ပြန်ကစားနိုင်ရန် တိုနီ ကရော့ မျှော်လင့်	shared by master_guru	on 05/10/13	ဘိုင်ယန်မြူးနစ် ကွင်းလယ် ကစားသမား တိုနီကရော့သည် ဒဏ်ရာကြောင့် အနားယူနေရသည့် ကစားသမား ဖြစ်ပေမယ့် သူသည် ရာသီမကုန်ခင် ဒဏ်ရာမှ သက်သာပြီး ပြန်လည်ကစားနိုင်ရန် မျှော်လင့်နေကြောင်း သိရ.......	နည်းပြနှင့် လမ်းခွဲလိုက်သည့် လော်ရာရော့ဘ်ဆင်	shared by master_guru	on 05/10/13	ဗြိတိန် တင်းနစ်မယ် လော်ရာ ရော့ဘ်ဆင်သည် သူမနှင့် ၉ လခန့် အကြာ လက်တွဲခဲ့သည့် ခရိုအေးရှား လူမျိုး နည်းပြ ဇယ်ကိုဂရာချန်နှင့် လမ်းခွဲလိုက်ကြောင်း သိရသည်။
ထိုသို့ လမ်းခွဲပြီး နာရီပ�.......	ဂျူဗီနည်းပြ ကွန်တီ အသင်းမှာ ဆက်ရှိမည်	shared by master_guru	on 05/08/13	ဂျူဗင်တပ် အသင်း ဒါရိုက်တာ မာရော်တာက အသင်းမှ ထွက်ခွာတော့မည့်ဟု သတင်းများ ထွက်ပေါ်နေသည့် အသင်း နည်းပြ ကွန်တီ သည် အသင်းမပြောင်းပဲ အသင်းမှာ ဆက်လက် ရှိနေမည်ဟု ယုံကြည်နေသည်။
ဂျူဗင်တ�.......	ရွေးကောက်ပွဲမှာ မလေးရှားအာဏာရ ညွှန်ပေါင်းအဖွဲ့အများစု အနိုင်ရ	shared by master_guru	on 05/08/13	မလေးရှားနိုင်ငံရဲ့ အာဏာရ ညွှန်ပေါင်းအစိုးရ အဖွဲ့ဝင်များဟာ ရွေးကောက်ပွဲမှာ အကြိတ်အနယ် ယှဉ်ပြိုင်အနိုင်ရခဲ့ပြီး နှစ်ပေါင်း (၅၆) နှစ်ကြာ အာဏာရရှိထားမှုကို ဆက်လက် ထိန်းသိမ်းထားနိုင�.......	မိုးဟေကို,ကို ဒီလိုမေးကြတယ်	shared by master_guru	on 05/08/13	“လူရယ်လို့ဖြစ်လာရင် အနုပညာရှင်မှ မဟုတ်ဘူး စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အိမ်မှာနေတဲ့ လူပဲဖြစ်ဖြစ် လူတိုင်း လူတိုင်းမှာ စိတ်အနှောင့်အယှက် ဖြစ်စရာ ဒေါသဖြစ်စရာ စိတ်တိုစရာလေ.......	၃၁ ကြိမ် ချန်ပီယံဆိုသော လစ်ပီ	shared by master_guru	on 05/08/13	နည်းပြဟောင်း မာဆယ်လို လစ်ပီက စီးရီးအေ ချန်ပီယံဆု ရရှိခဲ့သော ဂျူဗင်တပ်နှင့် ပတ်သက်၍ ချန်ပီယံ ဖြစ်ခဲ့သည်မှာ ၃၁ ကြိမ်ဟု မိမိတို့လက်ခံထားကြောင်း ပြောဆိုလိုက်သည်။
ဂျူဗင်တပ် အသင်း�.......	မော်ရင်ဟိုကို မျှော်လင့်နေသော ချဲလ်ဆီး ကစားသမားများ	shared by master_guru	on 05/08/13	ချဲလ်ဆီး တိုက်စစ်မှူး ဒမ်ဘာဘက အသင်းမှ စီနီယာ ကစားသမားများ အနေဖြင့် အသင်းနည်းပြဟောင်း မော်ရင်ဟို ပြန်လာရန် အတွက် မျှော်လင့်နေကြဆဲ ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
လက်ရှိတွင် ရီးရ�.......	ဂျက်စတင်ဘီဘာအား ရန်ပြုတိုက်ခိုက်ရန် ဒူဘိုင်း ပရိသတ်တစ်ဦး ကြိုးပမ်း	shared by master_guru	on 05/06/13	ဒူဘိုင်းတွင် ပြုလုပ်နေသည့် ဖျော်ဖြေပွဲအတွင်း ဂျက်စတင်ဘီဘာကို ပရိသတ် တစ်ဦးက တိုက်ခိုက်ရန် ကြိုးစားခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။ စန္ဒရားနှင့် တွဲဖက်ဖျော်ဖြေမှု ပြုလုပ်နေစဉ် ရူးမိုက်သော �.......	ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် အထူးအစည်းအဝေး ခေါ်ယူ	shared by master_guru	on 05/06/13	နိုင်ငံတော်သမ္မတက ထုတ်ပြန်ထားသော အမိန့်များနှင့် ပတ်သက်၍ အတည်ပြုပေးရန် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ပထမ အထူးအစည်းအဝေးကို မေ ၂၀ ရက်တွင် ကျင်းပမည် ဖြစ်သည်။
နိုင်ငံတော်သမ္မတက ထုတ်ပြန်ထားသည�.......	Newest1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 . . . . . Oldest
Teashoptalk on mobile
Latest updates are at your finger tips
Read from any device at
teashoptalk.com	Online users320 online	About TeashopTalk